Hello Nepal News » डे जोङले गरे बार्सिलोना छाड्ने संकेत !
डे जोङले गरे बार्सिलोना छाड्ने संकेत !
गत समर सिजनमा स्पेनिस बार्सिलोनामा चर्को चर्चाबीच अनुबन्ध भएका डच मिडफिल्डर फ्रेन्की जोङले स्पेन सरुवामा पछुतो अनुभूत गरेका छन् । हालै एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै युवा स्टारले ला लिगा बलियो लिग नभएको आफूले अहिले आएर बुझेको बताएका छन् ।
डे जोङको भनाइबाट उनलाई बार्सिलोना सरुवामा पछुतो लाग्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । अन्तर्वार्तामा बोल्दै डे जोङले भनेका छन्, ‘यहाँ आउनुअघिसम्म मैले ला लिगा विश्वकै सबैभन्दा कठिन लिग हो भन्ने सोचेको थिएँ । तर, अहिले मलाई लाग्छ, प्रिमियर लिग विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र उत्कृष्ट लिग हो ।’
डे जोङले स्पेनिस लिगमा ठूला र चर्चित खेलाडी हुनु तथा ठूला उपाधि धेरै स्पेनकै टिमले जितेकाले धेरैलाई आफैंलाई जस्तो लाग्न सक्ने बताए । ‘स्पेनिस टिम ठूला र सफल खेलाडीका कारण बढी ठूला जस्तो देखिन्छन् । उनीहरूले उपाधि पनि बढी जितेका छन् । तर, म अहिले ला लिगालाई उत्कृष्ट लिग मान्न तर छैन ।’
डे जोङले अघि थपे, ‘क्लब फुटबलको शक्ति यतिबेला प्रिमियर लिगमा छ । पछिल्ला वर्ष त्यहाँका क्लबहरू सबैभन्दा बलिया र सफल देखिए, यो निकै लोभलाग्दो छ ।’
डे जोङ बार्सिलोना जानुअघि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षकसँग डे जोङ अनुबन्धका लागि छलफल गरेका थिए । त्यसबेला सिटी डे जोङलाई डेभिड सिल्भाको उत्तराधिकारी बनाएर भित्र्याउन चाहन्थ्यो । तर, डे जोङले बार्सिलोना रोजेपछि सिटी चुप रह्यो ।
बार्सिलोनामा पहिलो सिजन बिताइरहेका डे जोङले २४ खेलबाट १ गोल गर्दै ३ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । बार्सिलोनामा पहिलो रोजाइमा पर्ने डे जोङले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहे पनि उनले आयाक्समा छँदाको जस्तो स्तर देखाउन भने सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति १४ पुष २०७६, सोमबार १४:५६